Knowledges Zone: ကိုယ်ပိုင် google website ဖွင်.ဖို.နည်းလမ်း
google site စတင်ဖန်တီးရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
google site စတင်ရန် web page ကတော. https://sites.google.com/ ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးနောက်သင်. မေးအကောက်ကိုဖြည်.ပါ။ပြီးနောက် create site ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ကပေးထားတဲ.အတိုင်းမြင်ရပါလိမ်.မည်။အချက်အလက်များဖြည်.ပါ။အောက်တွင်အပုံလေးများဖြင်.ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။
ပထမဆုံးဖြည်.ရမှာက site name (ဆိုက်ရဲ. နာမည်ပါ) ဆိုက်ပေါ်မှာသင်တင်ချင်တဲ. အကြောင်းအရာကို ဖြည်.ရင်တော.ပိုကောင်းပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ.
site description (ဆိုက်ပေါ်မှာသင်ရေးမယ်.ဖော်ပြချက်ကို ဖြည်.ရမှာပါ။)
အရွယ်ရောက် ပြီးသူများမှ ပေးကြည်.မလားလို.မေးတာပါ။ တကယ်လို.အရွယ်ရောက်သူသာပေးကြည်.ချင်တယ်ဆိုရင် အမှတ်လေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းပေး
ကြည်.ချင်ရင်တော. အမှတ် ဖြုတ်ထားလိုက်ပေါ.။
share ဆိုတာပေးကြည်.တာပါ။ အပေါ်က အစက်လေးခြစ်ထားတာကတော. ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ. လူတိုင်းကိုပေးကြည်.တာပါ။အောက်ကတော. ကိုယ်.ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်
theme တွေရဲ. design ကိုရွေးချယ်ဖို.ပါ။
ပေးထားတဲ. စာလေးကို တူအောက်ရိုက်ပြီး အောက်မှာပေးထားတဲ. အတိုင်း create site ကိုနှိပ်ရန်ပါဘဲ
အောက်ကပေးထားတဲ. အတိုင်း သင်google site တစ်ခုရလာပါလိမ်.မယ်။
ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Edit page ကို နှိပ်ပြီးပြင်ရုံပါဘဲ
ပြင်ပြီးရင် သင် အောက်ကပေးထားတဲ.အတိုင်း save လုပ်ရုံပါဘဲ။
တကယ်လို. စာမျက်နှာအသစ်လိုချင်ရင် တော. create page ကိုနှိပ်ပါ။
google site ဖွင်.တာ website ထဲမှာ အလွယ်ဆုံးပါဘဲ။ အကောင်းဆုံးလို.ဆိုရင်တောင်မှ မှားမယ်မထင်ဘူး။ လုပ်ရတာလည်းမြန်တယ်။ loading လုပ်တာလည်းမြန်တယ် ။ ဒီတင်ထားတဲ. အချက်အလက်လေးတွေကို မရှင်းတာရှိရင် windowxp125@gmail.com သို.ဆက်သွယ်နိူ်င်ပါတယ်။